Hery - Tsiky dia ampy | Sarimihetsika |
Fa ny tena resaka androany dia resaka sarimihetsika iray nahafinaritra... fa asa na mahasoa. (tohiny)
Volombatolalaka dimampolo karazana - Hijery?
2015-02-13 @ 08:37 in Sarimihetsika
Rahampitso ny 14 febroary (grrr mitontona asabotsy) ilay andro malazan'ny mpanao bizna isankarazany, manararaotra ny fo mafanan'ny tanora (sa ny antitra koa?) mirehidrehi-pitiavana. Saint Val tokoa rahampitso, val comme valeureux, lafolafo daholo ny zavatra rehetra mikasika ny fitiavana sy ny menamena. Val comme valable, satria dia valables daholo ny excuses rehetra voasaron'ny fitiavana. Val comme vallet... raha tena lehilahy dia misehoa :-) sa val comme vallée any an-dohasaha?
Fa ny tena resaka dia manintona mafy ilay film hoe "Fifty shades of grey" hivoaka rahampitso. Resaka tsy resaka momba azy eran'ny takelaka isan-karazany. Etsy ampitan'ny birao moa dia misy dokam-barotra goavana (io amin'ny sary). Ny tantara dia efa nivoaka boky tamin'ny 2011, nosoratan'i E. L. James mikasika ny fifandraisana lalina eo amina tovovavy mpianatra iray sy lehilahy mpandraharaha iray. Raha ny fahitana ny sombiny dia mafanafana ihany ilay izy ka tsy azo jerena miaraka amin'olom-pady... sao dia hoe fianakaviana iray manontolo no hijery film fa Saint Valentin.
Anisan'ny nampalaza ity sarimihetsika ity koa ny fisian'ireo dika hanihany (parodies) ataon'ny olona mikasika azy... misy an-jatony maro. Azonao jerena eto
Ito ary aloha ny sombiny dia ankafizo.
2014-09-11 @ 11:27 in Sarimihetsika
Nahafinaritra ahy ity sarimihetsika iray ity "Une rencontre" (2014) andraisan'i Sophie Marceau sy i François Cluzet anjara. Anaty fonosana, tena misy itovizana amin'i Dustin Hoffman tokoa i François Cluzet an. Tsy ho tantaraiko fa sao misy liana te hijery... fa tsy araka ny ampoizina ny farany. Ilay karazan'ny hoe maty ny "role" sns :-)
2013-05-30 @ 07:21 in Sarimihetsika
Hita indray koa iny. Film gidragidra ilay mahazo mpijery betsaka any amin'ny salle video any Dago. Tsy dia misy votoatiny mivaingana loatra fa fanindraindrana ny héro anakiray izay lalaovin'i Arnold Schwarzenegger. Mahafinaritra fotsiny ny mijery azy. Tahaka ny avy mijery video fahiny tonga dia lasa ohatry ny matanjaka sy commando be daholo :-)
2013-03-02 @ 07:25 in Sarimihetsika
Mba tafiditra tao anatin'ny horonantsary tiako indray ity Upside Down ity. Efa elaela mantsy tsy nisy horonantsary nivoaka mba nahafinaritra intsony. Ilay tantaram-pitiavana tao anatiny aloha dia classique be ihany, indrindra ilay resaka amnésie kely, fa ny tena nahafinaritra dia ilay hevitry ny mpamorona mihitsy. Ny tontolo ambony sy ny tontolo ambany, ny fanazavàna tamin'ny mpijery hatrany amboalohany ny anton'ilay tontolo roa sy ny fitsipi-dalao iainan'ny mponina mahatonga fisian'ny tontolo.
Tokony mbola betsaka ny zavatra azo noforonina tao anatin'ilay izy fa angamba sarotra tontosaina loatra dia tsy nataondry zareo intsony. Matetika mantsy ny tantara tahaka itony dia voatery atao dessins animés mba hahatontosa azy fa sarotra amboarina rehefa tena olona no manao azy... na dia hoe effets spéciaux aza no be dia be.
Film: DÃ©pression et des potes
2012-11-18 @ 01:28 in Sarimihetsika
Horonantsary maromaro no nojereko tamin'iny herinandro iny fa tamin'ity farany ity aho vao mba afa-po... kanefa sarimihetsika frantsay ity iray ity. "Dépression et des potes" (2012). Maivana, manala vizana, mampihomehy nefa koa ahitana ireo olam-pianakaviana andavanandro (mpivady, tsy mpivady, niteraka, tsy miteraka)...
Ah, ny horonantsary hafa nojereko dia "Ici-bas", "Escalade", "Miss Bala", "The watch"
Helen et 600 Kg d'or pur
2011-01-31 @ 09:26 in Sarimihetsika
Manomboka miverina tsikelikely ny fiainana andavanandro taorian'iny vakansy lava tany Dago iny (wawawa). Dia nanomboka niverina nijery sarimihetsika koa aho. Ny manamboatra clip aloha mbola tsy tafa mihitsy. (tohiny)
2010-06-24 @ 21:37 in Sarimihetsika
Efa manomboka miverina mijery film indray izao. Film telo na efatra isankerinandro aloha no tratra. Tamin'iny herinandro lasa iny dia nahafinaritra ilay Green Zone (trailler etsy ambany). Ohatry ny te handresy lahatra hoe tsy nisy fitaovam-piadiana simika izany tany Irak fa fikafika fotsiny iny mba hanesorana an'i Saddam Hussein teo amin'ny fitondrana. Dia terena be fotsiny hoe hisy ary izay mitady hahafantatra ny marina dia faizina.
Hitako tamin'iny herinandro iny koa Micmacs à tire-larigot (2008) miaraka amin'i Dany Boon. Film nahafinaritra na dia efa tranainy sy kidaladala ihany aza. Ary farany ilay film nampihomehy anakiray koa hoe Protéger et servir (2009) miaraka amin'i Kad Merad. Ie, mpilalao mahafinaritra ahy koa rangahy io fa betsaka ny film-ny efa hitako (Bienvenue chez les Ch'tis sy Le petit Nicolas no tena nilay). Amin'ity herinandro ity dia Agora, Prince of Persia, The book of Eli, dia mba asiana fihomehezana kely amin'ilay She's out of my league.
Mandroso amin'ny lalina kokoa
2008-09-01 @ 14:40 in Izaho sy ny ahy, Sarimihetsika
Tsy ilay hira malaza (manjary atao @ fiandrasam-paty foana) no tiako lazaina amin'ny lohateny fa dika tsotsotra an'ilay fiteny hoe "Keep moving forward". Omaly hariva aho vao nijery an'ilay Dessin Animé (ie, mpakafy an'ireny aho) hoe "Meet the Robinsons" satria hanomboka hiasa androany fa vita ny fialantsasatra dia hoe te hihomehy kely. Rehefa fotoana tiako hanadiovana ny atidohako hanadino vetivety ny ordinatera sy ny mombamomba azy mantsy dia mijery film-njaza toa ireny aho. (tohiny)
Omaly alina vao hitako ilay Into the Wild na dia efa tamin'ny 2007 aza no nivoaka. Henoko ihany ny lazany fa noheveriko hahamonamonaina satria dia efa ho 150mn be izao. Nony nijery azy anefa aho alina dia tena nankafy tanteraka. Raha mbola tsy hitanareo dia mba jereo ihany. (tohiny)
Talenta tsy mampino
2007-03-06 @ 13:38 in Sarimihetsika
Dia samy manana ny talentany marina ny olona. Fa misy ny an'ny sasany dia tena tsy mampino mihitsy.
Ary raha asiana tsindripeo mihitsy éééé